Afrika | Diary 2014
MPONINA 979 685 702
MPITORY 1 363 384
FAMPIANARANA BAIBOLY 3 265 314
“Vonona hiala ao amin’ny Babylona Lehibe aho izao”
Leo fivavahana i Thomson, tovolahy iray any Ogandà, ka tsy niangona intsony. Mangata-bola foana mantsy ny mpitondra fivavahana. Na izany aza, dia namaky Baiboly isan’andro izy. Nahaliana azy ny bokin’ny Apokalypsy, ka nandramany nadika ny heviny ary nosoratany tao amin’ny karine. Hitan’ny rahalahy iray namaky Baiboly izy, indray andro, tao amin’ilay toeram-panorenana kely niasany. Nafana ny resaka ka nandray boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? i Thomson. Voavakiny indray alina monja ilay boky manontolo. Naharay hafatra tamin’ny telefaonina ilay rahalahy ny ampitson’iny hoe: “Misaotra ny Tompo aho tamin’ireny fanazavana nomenao ireny. Vonona hiala ao amin’ny Babylona Lehibe aho izao.” Nangatahin’i Thomson daholo ny boky voalazan’ny fanamarihana ambany pejy sy ny fanazavana fanampiny tao amin’ilay boky. Nazoto nianatra Baiboly izy, ary nandroso haingana ka natao batisa tamin’ny 2012, tamin’ny Fivoriamben’ny Vondrom-paritra “Arovy ny Fonao!” Lasa mpisava lalana maharitra izy tamin’ny Martsa 2013, ka manampy ny olona hahita hoe ilaina ny miala ao amin’ny Babylona Lehibe.
Efa rahalahy valo no nampianatra azy
Lehibe tany Port Louis, renivohitr’i Maorisy, i Jimmy. Vao 16 taona izy dia efa nisotro toaka, ary tsy ela dia mamo foana isan’andro. Matetika izy no tsy nahafehy tena rehefa mamo, ka nigadra imbetsaka. Ao anatin’ny iray andro izy indraindray mahalany toaka telo tavoahangy sy sigara 60. Sotroiny hatramin’ny alkaola fanadiovana fitaratra rehefa tsy manam-bola izy. Laniny koa aza ny ranomanitry ny reniny. Nisy niteny taminy hoe hoatran’ny taolana mandehandeha izy, ka lasa izy nanatona toeram-pitsaboana olona mpidoroka zava-mahadomelina. Nijanona tany herintaona sy tapany izy, nefa tsy nisy vokany akory.
Rodrigues: Tapa-kevitra ny hiova i Jimmy
Nihaona tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah i Jimmy tatỳ aoriana, ary nanaiky hianatra Baiboly. Teo am-pianarana Baiboly ry zareo indraindray no lasa izy nandeha nisotro. Efa rahalahy valo no nampianatra azy, raha atambatra. Tsapany ihany tamin’ny farany hoe nila niova izy. Hoy izy: “Hoatran’ny hoe nitsatoka tato am-poko ilay sabatra resahin’ny Hebreo 4:12. Rehefa namaky Baiboly aho, indray andro, dia nahita ny Ohabolana 24:16 hoe: ‘Mety ho lavo impito ny marina, nefa ho tafarina ihany.’ Io no nanova ny fiainako.” “Lavo” foana tokoa i Jimmy teo aloha. Tapa-kevitra ny hiova sy ‘hiarina’ anefa izy, rehefa nampian’ilay rahalahy fahavalo. Nangataka ny fanampian’i Jehovah izy, namonjy fivoriana, ary niala tamin’ny fahazaran-dratsiny. Natao batisa izy tamin’ny 2003, ary lasa mpisava lalana tamin’ny 2012. Mpanampy amin’ny fanompoana ao amin’ny fiangonana ao amin’ny Nosy Rodrigues izy izao.
“Jehovah sy ny anjely no ho namako”
Avy any Kenya i Mary, 70 taona, ary efa tao amin’ny Fiangonana Presbyterianina hatramin’izay niainany. Nahita hevitra hahazoan’ny fiangonana vola foana izy, ary nanampy tamin’ny fanamboarana fiangonana iray tao an-tanànany. Tsy faly izy rehefa lasa Vavolombelona ny zanany lahy iray. Nasain’io zanany io hamonjy fivoriana izy nefa tsy nety. Aleony, hono, mihaino toriteny amin’ny teny kikuyu toy izay amin’ny teny swahili. Nanaiky izy tamin’ny farany rehefa nasaina hanatrika fivoriamben’ny vondrom-paritra tamin’ny teny kikuyu, izay fitenin-drazany. Nipetraka teo amin’ny toerana ho an’ny be taona izy tany. Gaga izy fa be fitiavana sy tsara fanahy taminy ny olona. Nilaza i Mary fa mbola tsy nanehoana fitiavana hoatr’izany izy tany amin’ny fiangonany. Nohenoiny tsara ny lahateny rehetra ary tena tiany ny zavatra reny. Nanaiky hianatra Baiboly tamin’ny bokikely Mihainoa An’Andriamanitra koa izy.
Te ho lasa Vavolombelon’i Jehovah i Mary rehefa nianatra Baiboly nandritra ny volana vitsivitsy, ka nametra-pialana tany amin’ny fivavahany. Tezitra be ny mpitondra fivavahana tao. Nanafatra pasitera avy tany Nairobi renivohitra mihitsy ry zareo mba handresy lahatra azy hijanona. Hoy ilay pasitera: “Iza intsony no ho namanao eo, raha miala ato amin’ny fiangonana ianao? Presbyterianina daholo ange ny namanao sy ny mpiray tanàna aminao e!” Tsy niova hevitra anefa i Mary.
Hoy izy: “I Jehovah sy ny anjely no ho namako, dia ny Vavolombelona koa.”
Niala maina ilay pasitera. Mbola mianatra Baiboly foana i Mary ary mampihatra an’izay ianarany. Manatrika ny fivoriana rehetra koa izy, na lavitra be aza ilay toerana. Tsy nanana saran-dalana izy, indray andro, ka nandeha an-tongotra adiny roa tao anatin’ny orana mikija. Na manenjika azy aza ny mpiray tanàna aminy, dia ny hatao batisa ihany no tanjony.
Liberia: Mandamina seza hanaovana Fahatsiarovana. Nandray olona 81 762 ny mpitory 6 148, tamin’ny 2013
“Nofinganin’ilay pasitera aho”
Miara-mipetraka amin’ny dadatoany sy nenitoany any Cameroun i Ashton, ankizivavy 14 taona. Nanohitra be ry zareo tamin’izy nanomboka nianatra Baiboly tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Noteren-dry zareo hiaraka taminy tany amin’ny Fiangonana Pentekotista izy. Nandritra ny fotoam-pivavahana iray, dia nametra-tanana tamin’ny mpiangona ny pasitera. Nianjera ilay olona avy eo, satria nisy fanahy nifindra, hono, tao aminy. I Ashton kosa tsy nianjera. Nivavaka foana ilay pasitera fa mbola tsy nianjera ihany izy. Nofinganin’ilay pasitera àry izy mba hianjera. Nony tonga tany an-trano izy dia nilazany ny dadatoany sy nenitoany hoe: “Nofinganin’ilay pasitera aho.” Tsy nino azy anefa ry zareo. Tsy nety ho any am-piangonana intsony izy nanomboka teo. Mivory any amin’ny Efitrano Fanjakana foana izy izao, na dia manohitra be aza ny fianakaviany sy ny mpiray tanàna aminy.
Ankizikely no nanasa azy
Avy any Angola i Anilpa. Vao herintaona sy dimy volana izy tamin’ny taon-dasa, nefa efa tena nazoto nanasa olona hamonjy fivoriamben’ny vondrom-paritra. Mpandondòna varavarana sy mpanolotra fanasana no anjarany, fa ny reniny no manazava. Nafana fo erỳ izy, ka mbola tsy vita akory ny fanazavana indraindray, dia efa lasa izy mandondòna varavarana hafa. Tena nampiaiky an’ireo olona nitoriany mihitsy izy. Nisy vehivavy iray nanatona an’i Anilpa, ohatra, ny andro farany tamin’ilay fivoriambe, ary niteny hoe: “Nitady an-dry foana aho. Faly be aho fa hitako ihany indrỳ satria indrỳ no nanasa ahy ho atỳ.”
Tofoka amin’ny ataon’ny mpitondra fivavahana izy ireo
Nisy olona vitsivitsy nihaona tamin’ny mpitory tao amin’ny Fiangonana Antaviranambo, eto Madagasikara, tamin’ny Aogositra 2012. Nilaza ireo olona ireo hoe te ho lasa Vavolombelon’i Jehovah ry zareo. Mankaleo be, hono, ny ataon’ny mpitondra fivavahana ao aminy fa mpitari-bato vilam-bava. Tsy mba misy fandaharana fampianarana Baiboly, hono, ao amin-dry zareo, sady tsy misy boky manazava ny zavatra inoany. Be dia be koa ny adidy tsy maintsy aloa sady tsy mba mifankatia izany ny mpiangona. Fantany anefa hoe tsy hoatr’izany ny ao amin’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Nanoratra tany amin’ny biraon’ny sampana izy ireo, tatỳ aoriana, hoe: “Tianay ho fantatrareo fa te hanompo an’i Jehovah izahay. Lavitra be anefa no misy anay. Mandeha an-tongotra adiny 9 ka hatramin’ny 15 ny sasany aminay vao tonga any amin’ny toerana misy fivoriana. Mba andefaso olona hampianatra Baiboly anay re izahay e. Tsy ho afaka hanompo an’i Jehovah amin’ny fo manontolo izahay, raha tsy mahazo fanampiana mba ho tia azy kokoa. Misy 215 izahay ary avy amin’ny tanàna telo, fara fahakeliny. Samy hafa fivavahana izahay nefa samy te hanompo an’i Jehovah sy hankatò azy amin’ny fo manontolo. Matoky izahay fa hanampy anay ianareo.”
Nisy rahalahy nandeha àry tany amin’ireo olona ireo. Nandeha an-tongotra adiny sivy izy ireo vao tonga tany amin’ilay tanàna voalohany, ary nahita olona liana be dia be. Nandamina fivoriana izy ireo, ka 65 ny mpanatrika. Vetivety dia niely ny resaka, ka te hotsidihina sy hampianarina Baiboly koa ny olona tany amin’ny tanàna hafa. Nandeha an-tongotra adiny efatra indray ireo rahalahy ireo mba hankanesana tany, ary 80 mahery ny mpanatrika tao. Nanasa azy ireo ho any aminy indray ny olona avy any amin’ny tanàna hafa, izay adiny roa miala eo. Nanao fivoriana tany koa ireo rahalahy, ka 50 mahery ny mpanatrika.
Nisy 30 mahery tamin’izy ireo efa indroa nanatrika fivoriambe tany Mahanoro, ka nandeha an-tongotra iray andro sy tapany vao tonga tany. Olona 25 koa no tonga nanatrika ny fitsidihan’ny mpiandraikitra ny faritra. Tao ny mpivady, fianakaviana iray manontolo, ary be taona. Nitoby tamin’ny trano anankiray izy rehetra. Niresadresaka teo izy ireo ary nametraka fanontaniana hatramin’ny alina be. Nilaza izy ireo fa mbola be dia be ny hanatevin-daharana ny Vavolombelona, satria efa tofoka amin’ny ataon’ny mpitondra fivavahana ny olona.